ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များကို အူရီဒူးက တယ်လီနောနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်လိုဟုဆို ~ The ICT.com.mm Blog
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များကို အူရီဒူးက တယ်လီနောနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်လိုဟုဆို
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တည်ဆောက်သည့် အသံလွှင့် တာဝါတိုင်များကို မျှေ၀သုံးစွဲရန် အူရီဒူးက တယ်လီနောနှင့် ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း အူရီဒူး၏ ထိပ်တန်းအမှုဆောင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်ဟု သိရသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီစု ၉၀ကျော်ထံမှ စိတ်၀င်စားမှု ရရှိပြီးနောက် မြန်မာသည်ပထမဆုံးအဖြစ် မိုဘိုင်းလိုင်စင်များကို အဆိုပါ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို ဇွန်လက ချပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ၁၅နှစ်ကြာ လိုင်စင်သက်တမ်းကာလအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၅ဘီလီယံသုံးစွဲရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု အူရီဒူးက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါဟာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ စလုပ်ရမယ့် အခြေအနေပါ။ ကျွန်တော်တို့ စီးပွားမိတ်ဖက်အဖြစ် တယ်လီနောနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကွန်ရက်တွေကို တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်”ဟု အူရီဒူး၏ မဟာဗျူဟာ အရာရှိချူပ် ဂျယ်ရယ်မီးဆဲလ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဒူဘိုင်းတွင်ပြုလုပ်သော ကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒါမျိုးအရင်က မလုပ်ဖူးသေးပါဘူး။ အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ရက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ လှိမ့်၀င်ရမှာပါ။ သံမဏိ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ကရစ်လုပ်ထားတဲ့ အရာမှန်သမျှ ကျွန်တော်တို့ ေ၀မျှသုံးချင်ပါတယ်”ဟု ဆဲလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသို့ တယ်လီနော်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက ကာတာအစိုးရက အများစု ပိုင်ဆိုင်သော အူရီဒူးအတွက် ကုန်ကျစရိတ် အတော်အတန်သက်သာစေနိုင်သည်ဟု ဆဲလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ သုံးသပ်ချက်များ ရယူရေးအတွက် တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် မေးမြန်းခြင်းကိုမူ တယ်လီနောပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
နိုင်ငံ၏ကျောထောက်နောက်ခံ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သော ရတနာပုံတယ်လီပို့ (YTP)နှင့် မြန်မာ့စာတိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး (MPT)တို့မှာ မိုဘိုင်းလိုင်စင်များကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ YTPသည် အဓိကအားဖြင့် အင်တာနက်၀န်ဆောင်မှု ဆောက်ရွက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ဌာနတစ်ခုဖြစ်သော MPTကလည်း လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သူ အနေဖြင့်သာမက အော်ပရေတာတစ်ဦးအနေဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် ၄င်းတို့ချည်းသက်သက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္႑ကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ၂၀၁၂ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းထိုးဖောက်မှုမှာ ၁၁ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ၏နောက်တွင် အီရစ်ထရီးယား၊ ဆိုမာလီယာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့သာ ကျန်ရှိတော့သည်ဟု ဆိုသည်။ ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေ သန်း ၆၀အနက် တစ်ရာခိုင်နှုန်းကသာ အင်တာနက်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း International Telecommunication Unionက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ တယ်လီနောနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆဲလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အူရီဒူးက ပြည်တွင်းအော်ပရေတာ နှစ်ခုနှင့်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားဖွယ်ရှိသည်ဟု ထပ်မံပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Newer သံတွဲ အကြမ်းဖက်မှု အမေရိကန်အစိုးရ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
Older Chromeရဲ့ Built-In PDF Viewerကို အသုံးချနည်းများ
3 thoughts on “ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များကို အူရီဒူးက တယ်လီနောနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်လိုဟုဆို”
Aung Kyaw Minn says:
f*** off Oredoo. just try to compete with each other for better services and prices for the users. Try not to control the markets in ur own ways to get more profits.
သူနဲ႔ မပူးေပါင္းတဲ့ ေအာ္ပေရတာကို သံုးမယ္
Kami Hana says:
Fuck off ,Oredoo. Shameless Muslim Company. Shameless Myanmar Governments.